Hordhac: Real Sociedad vs Barcelona: Blaugrana Oo Booqanaysa Garoon Ay Ku Dhibaatooto – Kooxda.com
Home 2018 January Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac: Real Sociedad vs Barcelona: Blaugrana Oo Booqanaysa Garoon Ay Ku Dhibaatooto
Hordhac: Real Sociedad vs Barcelona: Blaugrana Oo Booqanaysa Garoon Ay Ku Dhibaatooto
Kooxda Barcelona ayaa ciyaari doonta mid ka mid ah kulamada ugu adag horyaalka La Liga iyada oo booqan doonta garoonka San Sebastian si ay ula ciyaaraan kooxda Real Sociedad kulan ka tirsan todobaadkii 19-aad ee tartanka.
Blaugrana ayaa qaab aan caadi ahayn ku jirta ilaa haatan xilli ciyaareedka iyada oo badisay 15 kulan halka ay bar-baro gashay 3 kale 18 kulan oo ay ciyaartay waxana ay marka dhinac loo eego ku guulaysteen horyaalka xilli ay 16 dhibcood ka horeeyaan kooxda difaacanaysa horyaalka.
Jawiga qolka labiska ayaa haatan ah mid fiican kadib markii ay kooxda tababare Valverde ugu dambayn dhamaystireen saxiixa Philippe Coutinho oo si Rasmi ah kooxda ugu soo biiray Isniintii laakiin ma ciyaari doono kulanka maadama uu dhaawac ka soo kabsanayo.
Kooxda Martida loo yahay ee Sociedad ayaa dhankeeda qaab ciyaareed fiican ku jirta iyada oo ciyaaraysay ciyaar xiiso leh kulamadii ugu dambeeyay.
Garoonka: San Sebastian
Kooxda Real Sociedad ayaa mar kasta kooxda Barcelona dhibaato ku abuurta marka ay ku ciyaarayso garoonkeeda San Sebastian.
Kooxda Barcelona ayaa kaliya 6 guulood kala baxday garoonka San Sebastian 23 kulan oo ay ku ciyaartay halka Sociedad badisay 8 kualn.
Si kasta ha ahaatee Barcelona ayaa guul gaartay 3-dii kulan ee ugu dambeeyay ee ay la ciyaartay kooxda Real Sociedad.
Lionel Messi ayaa 14 gool ka dhaliyay 19 kulan oo uu ka hor tagay kooxda Real Sociedad tartamada oo dhan laakiin xiddiga reer Argentine ayaa kaliya 4 gool ku dhaliyay garoonka San Sebastian.